အီလီနွိုက်စ Urbana-Champaign ကဓာတ်ပုံခရီးစဉ်တက္ကသိုလ်
ကျောင်းသားများ & မိဘများအဘို့ တစ်ကောလိပ်ရွေးချယ်ခြင်း
by Marisa ဗင်္ယာမိန်
Altgeld ခန်းမနှင့် UIUC မှာ Alma Mater ရုပ်ထု, အီလီနွိုက် Urbana-Champaign ကတက္ကသိုလ်။ ဘရိုင်ယန် Holsclaw / Flickr ကို
Urbana-Champaign ကမှာအီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်ကချီကာဂိုပြင်ပအကြောင်းကို2နာရီတည်ရှိသောအများသုံး, သုတေသနတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယောဟန်သည်မီလ်တန်ဂရက်ဂိုရီတို့က 1867 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ဒီတက္ကသိုလ်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှပြီးနောက်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အတွက်ဒုတိယအသက်အကြီးဆုံးအများပြည်သူတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရက်ဂိုရီသာ2ဒြေအဖွဲ့ဝင်များနှင့် 77 ကျောင်းသားများကိုနှင့်အတူဤတက္ကသိုလ်စတင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါတက္ကသိုလ်သည်ယခုအခါ 32.281 တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများနှင့် 12.239 ဘွဲ့လွန်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၏ကောလိပ်အသုံးချကျန်းမာရေးသိပ္ပံကောလိပ်, လေကြောင်း၏ Institute က, စီးပွားရေး၏ကောလိပ်ပညာရေးကောလိပ်, အင်ဂျင်နီယာကောလိပ်, Fine နှင့်အသုံးချဝိဇ္ဇာကောလိပ်, အထွေထွေလေ့လာရေးဌာနခွဲ, ဘွဲ့လွန်: ကျောင်းသားများ 17 ကွဲပြားခြားနားသောကောလိပ်များမှရွေးချယ်နိုင်ကြသည် ကောလိပ်, အလုပ်သမားနှင့်အလုပ်အကိုင်ဆက်ဆံရေး, ဥပဒေကောလိပ်, လစ်ဘရယ်ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ, စာကြည့်တိုက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်သိပ္ပံဘွဲ့လွန်ကျောင်း, မီဒီယာ၏ကောလိပ်, Urbana-Champaign ကမှာဆေးပညာကောလိပ်, လူမှုရေးလုပ်ငန်း၏ကျောင်း, နှင့်ကုသရေး၏ကောလိပ်၏ကောလိပ်၏ကျောင်း ဆေး။ အဆိုပါတက္ကသိုလ်ကိုလည်းအွန်လိုင်းနှင့်ဆက်လက်ပညာရေးအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်များနှင့်လေ့လာမှုများပေးထားပါတယ်။ ယေဘုယျအားကျောင်း 150 ကျော်တက်ရောက်အစီအစဉ်များနှင့် 100 အဘွဲ့ရအစီအစဉ်များကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏အများအပြားအားသာချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းတွင်နေရာတစ်နေရာရရှိခဲ့ ထိပ်တန်း 10 ပြည်သူ့တက္ကသိုလ်များ ။
တက္ကသိုလ်ရဲ့တောင်ဘက်ကျောင်းဝင်းထဲမှာတစ်ဦး 10000 ပေါင်, ကြေးဝါရုပ်တုပညာသင်နှစ်သင်္ကန်းများနှင့်ပွင့်လင်းလက်နက်နှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးပုံနဲ့သရုပ်ဖော်ထားပါတယ်။ Alma Mater အမည်ရှိအဆိုပါရုပ်တု, ကျောင်းသားဟောင်းများ Lorado Taft ကဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ သူကတက္ကသိုလ်ရဲ့ဆောင်ပုဒ် "သင်ယူခြင်းနှင့်အလုပ်သမားရေးရာ" ကိုကိုယ်စားပြုဖို့ကဖန်တီးခဲ့သည်။
GPA, SAT နှင့် ACT ဇယား UIUC အဆင့်လက်ခံရေးများအတွက်
UIUC, အီလီနွိုက် Urbana-Champaign ကတက္ကသိုလ်နေအိမ်သို့ခန်းမ။ Dianne ရီ / Flickr ကို
Urbana-Champaign ကမှာအီလီနွိုက်တက္ကသိုလ် 22 နေထိုင်ရာခန်းမနှင့်၎င်း၏ကျောင်းဝင်းအပေါ် 15 ပုဂ္ဂလိက certified ရရှိထားပြီးအိမ်ရာများရှိပါတယ်။ အဆိုပါဘွဲ့ကြိုခန်းမ Barton နှင့် Lundgren, Hopkins, Nugent, Weston, Bousfield, Scott, Snyder နှင့် Taft ဗန်-Doren ဖြစ်ကြသည်။ ဘွဲ့ရများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျောင်းသားများအတွက်, UIUC နှစ်ခုခန်းမ, ဒံယေလနှင့် Sherman ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးလူနေအိမ်ကျောင်းသားများကို6ကျောင်းဝင်းထမင်းစားခန်းခန်းမ, 12 စားသောက်ဆိုင်, 24 နာရီကွန်ပျူတာစင်တာများနှင့် complimentary cable ကို / အင်တာနက် access ကိုရှိသည်။ အဲဒီအစားကျပန်းတွဲအခန်းဖော်၏, အခန်းဖော်အကျိုးစီးပွားနှင့်လူနေမှုအလေ့အထအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်ထားသည်။ ဒါ့အပြင် 21 နှစ်အောက်ပထမဦးဆုံးအချိန်ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးကျောင်းဝင်းနေထိုင်ရာမှာနေထိုင်ရပေမည်။
အဆိုပါကျောင်းဝင်းလည်းရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထား / sorority အိုးအိမ်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါတက်ရောက်လူဦးရေရဲ့တစ်ဝှမ်း 23% ကို 97 ဂရိအခန်းကြီးတဦးနှင့်အတူဆက်နွယ်နေသည်။ အများအပြားအခန်းကြီးရိုးရာများမှာနေစဉ်, အချို့ဘာသာရေးအရသို့မဟုတ်ပညာရှင်ပီသစွာအာရုံစူးစိုက်, ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ကြသည်။
အီလီနွိုက်စ Urbana-Champaign ကတက္ကသိုလ် Illini ပြည်ထောင်စု
Illini သမဂ္ဂ, UIUC မှာကျောင်းသားသမဂ္ဂ, အီလီနွိုက် Urbana-Champaign ကတက္ကသိုလ်။ Lil နှင်းဆီ / Flickr ကို
အဆိုပါ Illini ပြည်ထောင်စုလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းသားယူနီယံ, ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ထမင်းစားခန်းများအတွက်အချက်အချာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက quad ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး, ပြည်ထောင်စုတစ်အစားအစာတရားရုံး, စာအုပ်ဆိုင်, ကွန်ပျူတာဓာတ်ခွဲခန်း, လေ့လာမှုနေရာများ, ဖမ်းယူရေးအခန်း, အနုပညာပြခန်းနှင့်လိင်တူချစ်သူအရင်းအမြစ်စင်တာပါရှိသည်။ အဆိုပါပြည်ထောင်စုမှာလည်း 72 ခန်းနှင့်2VIP အစုံနှင့်အတူဟိုတယ်ပါရှိသည်။ အဆိုပါအဆောက်အဦး 1941 ခုနှစ်တက္ကသိုလ်မှဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်အီလီနွိုက် Foundation မှတက္ကသိုလ်နှင့် ပူးပေါင်း. တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Illini ပြည်ထောင်စုဟာ Illini ပြည်ထောင်စုဘုတ်အဖွဲ့ကကြီးကြပ်သည်။ အဆိုပါ IUB အစီအစဉ်၏ကျောင်းသားများနှင့် Illini ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိဖြစ်ရပ်များစည်းရုံး။ သူတို့ကသောကြာနေ့ညဇာတ်ကားတွေထဲကနေအရာအားလုံးကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခြင်းနှင့်ဟာသ, ရေခဲပြင်ပေါ်ဂေးတစ်ခုလိင်တူချစ်သူရေခဲစကိတ်စီးခြင်းအဖြစ်အပျက်ပြသထားတယ်။
အီလီနွိုက်စ Urbana-ရှန်ပိန်တက္ကသိုလ်မှ Boneyard Creek အဘိဓါန်
အီလီနွိုက်စ Urbana-ရှန်ပိန်တက္ကသိုလ်မှ Boneyard Creek အဘိဓါန်။ Dianne ရီ / Flickr ကို
Boneyard Creek အဘိဓါန် Urbana နှင့် Champaign ကမှတဆင့်ပြေးတဲ့ 3.9 မိုင်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Creek အဘိဓါန်ဒုံချိတ်မြစ်သို့စီးဆင်း။ 1980 ခုနှစ်, ချောင်း Urbana-Champaign က၏နေထိုင်သူများအများအပြားအဘို့အရေကြီးမှုစေ၏။ ဒီတော့ UUIC ရေကိုသွန်းတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာမြို့များကိုအတူပူးပေါင်း။
အခုတော့ boneyard ချောင်းဘေးနားရှိအင်ဂျင်နီယာကျောင်း, မြောက်ပိုင်းကျောင်းဝင်းမှတဆင့်ပြေး။ ချောင်းအပြီးကွန်ပျူတာစက်ခေါင်းစဉ်က၎င်း၏သတင်းလွှာများအတွက်အသင်းမှတက္ကသိုလ်ရဲ့အခနျးမှာပါ "ဟု Boneyard ၏ဘဏ်များ" ။
UIUC မှာ Boneyard Greenway
UIUC မှာ Boneyard Greenway ။ Dianne ရီ / Flickr ကို
2010 ခုနှစ်ကဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် boneyard greenway နောက်တစ်နေ့ boneyard ချောင်းနှင့် Scott ပန်းခြံမှတည်ရှိသောပန်းခြံများနှင့်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မည်သည့်ကားကိုယာဉ်အသွားအလာထဲကနေအခမဲ့ဒါလမ်းကြောင်းကို, လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့်စက်ဘီးစီးများအတွက် soley ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ greenway သေးငယ်တဲ့စမ်းရေတွင်းတစ်ဦးပွဲကြည့်စင်, ခုံတန်းရှည်နှင့်စားပွဲရှိပါတယ်။ ဒါဟာအများအပြားကျောင်းသားအိပ်ဆောင်နှင့်အစိမ်းရောင်လမ်း, များစွာသောစားသောက်ဆိုင်နှင့်အတူလမ်းတစ်လမ်းအနီးတည်ရှိသည်။ အဆိုပါ Boneyard greenway ကျောင်းသားများကိုကျောင်းဝင်း၏အသကျပရမ်းပတာနေဆုတ်ခွာနေပေးသည်။
UIUC ပြည်နယ်လယ်ယာရေးစင်တာ။ GCT13 / Wikimedia Commons
၎င်း၏ကြီးမားသောအမိုးခုံးပုံသဏ္ဌာန်အားဖြင့်ကျောင်းဝင်းအပေါ်အသိအမှတ်ပြု, ပြည်နယ်လယ်ယာ Center ကအဆိုပါ Fighting Illini ဘတ်စကက်ဘောအသင်းတွေများအတွက် State-Of-The-Art ဘတ်စကက်ဘောအားကစားရုံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အဆိုပါရှုပ်ထွေးထက်ပိုမို 16,000 ထိုင်ခုံရရှိထားသူ, home-ဂိမ်းတက်ရောက်သူများအတွက်တစ်နိုင်ငံလုံးထိပ် 25 အတွက်ရပ်တည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ လူတို့သညျရဲ့အဖွဲ့ 1963 ခုနှစ်တွင်ဆောက်လုပ်ရေးကတည်းကဒီနေရာမှာကစားထားပြီးနေစဉ်, အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောအစီအစဉ်ကိုအဆိုပါစင်တာကစားသမားတစ်ဦးချုပ်တရားရုံးအဖြစ်ယင်းပါတီ, လေ့ကျင့်ရေးအခန်းကနှင့်ထမင်းစားခန်းဧရိယာကမ်းလှမ်း 1981 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ 2005 ခုနှစ်တွင်တက္ကသိုလ်အားကစားကွင်း၏ဗဟိုအတွက် 1.7 သန်းဒေါ်လာစျေးကဗီဒီယိုဘုတ်အဖွဲ့ installed ။
ပြည်နယ်လယ်ယာရေးစင်တာကိုလည်းဘရော့ဒ်ဝေး Music, ဟာသရှိုးများ, ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်များစွာသောအခြားဖြစ်ရပ်များရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော Aerosmith, Kanye West နှင့် Dave ချာပယ်လ်အဖြစ်အဆိုတော်များ, ဒီမတူကွဲပြားအာကာသအတွင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
အီလီနွိုက်စ Urbana Champaign ကတက္ကသိုလ်သတိရအောက်မေ့အားကစားကွင်း
UIUC သတိရအောက်မေ့အားကစားကွင်း။ buba69 / Flickr ကို
သတိရအောက်မေ့အားကစားကွင်းဟာ UIUC ဘောလုံးအားကစားကွင်းနှင့်တိုက်ခိုက်နေ Illini မှမူလနေရာဖြစ်သည်။ 1923 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီး, အားကစားကွင်းသူတို့၏အမည်များအားကစားကွင်းပတျဝနျးကငျြတိုင်သို့ခြစ်ရာမပေါ်နေကြသည်ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းသေဆုံးသူ UIUC ကျောင်းသားတစ်ဦးအောက်မေ့ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအားကစားကွင်းထက်ပိုမို 60,000 ပရိသတ်စီးနင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစနှစ်ပတ်လည်မတ်လ Band ပွဲတော်အိမ်ရှင်အဖြစ်။ မတ်လ Illini ကကမကထ, ဒီအီလီနွိုက်ပြည်နယ်၏အကြီးဆုံးအထက်တန်းကျောင်းချီတက်နေသောတီးဝိုင်းယှဉ်ပြိုင်သည်။
အဆိုပါ Fighting Illini ဘောလုံးအသင်းအဆိုပါ Big ဆယ်ပါးညီလာခံ UIUC, Indiana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, အိုင်အိုဝါတက္ကသိုလ်, မေရီလန်းပြည်နယ်၏တက္ကသိုလ်, မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်, မစ်ရှီဂန်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, မင်နီဆိုတာတက္ကသိုလ်, တက္ကသိုလ်ဖွဲ့စည်းသော Big ဆယ်ပါးညီလာခံနှင့် NCAA ရတိုင်းဗြဲအတွက် UIUC ကိုယ်စားပြုတယ် Nebraska-လင်ကွန်း, Northwestern University, Ohio ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, Pennsylvania ပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, Purdue တက္ကသိုလ်, Rutgers တက္ကသိုလ်, Wisconsin-Madison တက္ကသိုလ်။
အီလီနွိုက်စ Urbana Champaign ကတက္ကသိုလ်ဆိုင်ကယ်လမ်းကျဉ်းများ
UIUC မှာဆိုင်ကယ်လမ်းကျဉ်းများ။ Dianne ရီ / Flickr ကို
UIUC ရဲ့ကျောင်းဝင်းတစ်လျှောက်လုံး UIUC ရဲ့ကျောင်းပရဝုဏ်ဆိုင်ကယ်ရေးစင်တာနှင့်ပို့ဆောင်ရေး Demand ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, စက်ဘီးလမ်းကြောင်းများနှင့်ယာဉ်ရပ်နားပြေး၏အားထုတ်မှုမှတစ်ဆင့်။ Urbana-Champaign က၏ဆိုင်ကယ်စီမံကိန်းနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. အဆိုပါကျောင်းပရဝုဏ်ဆိုင်ကယ် Center က biker များအတွက်အားပေး UIUC ဘေးကင်းနှင့်ပိုပြီးလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါသဘာဝအရင်းအမြစ်ဂိုဒေါင်ထဲမှာတည်ရှိပြီးဗဟိုက၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များစက်ဘီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအပေါ်အတန်းပေးထားပါတယ်။ သူတို့ကအစကိရိယာများ, အစိတ်အပိုင်းများကိုရောင်း။ နှင့်စက်ဘီး refurbished ။ ကျောင်းသားများအတွက်အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်ကြေးကို 25 ဒေါ်လာသို့မဟုတ်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်၏ 8 နာရီနှင့်အတူအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
UIUC စီးပွားရေးနှင့်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်။ Dianne ရီ / Flickr ကို
အဆိုပါစီးပွားရေးနှင့်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက် (bel) စီးပွားရေး, ဘောဂဗေဒနှင့်အခြားဆက်စပ်နယ်ပယ်များတွင် 65,000 volumes ကိုနှင့် 12000 စာစောင်နှင့်အမှတ်စဉ်ခေါင်းစဉ်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားများကိုလည်းစာကြည့်တိုက် Gateway မှာတဆင့်အားလုံးနီးပါးသည်ဤအရင်းအမြစ်များကိုဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။ စာကြည့်တိုက် Gateway မှာကျောင်းသားများနှင့်ဆရာ, ဆရာမများစာကြည့်တိုက်ရဲ့အရင်းအမြစ်များကိုမှတဆင့်ရှာဖွေခွင့်ပြုမယ့်ဒေတာဘေ့စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစဖြစ်တယ်တဲ့ဒြေ directory ကိုရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ bel အများအားဖြင့်အီလီနွိုက်မှာစီးပွားရေး၏ကောလိပ်မှကျောင်းသားများဆောင်ရွက်ပါသည်။ ယင်း၏3ဌာနများ, စာရင်းကိုင်ပညာ, စီးပွားရေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအကြား, ဒီကောလိပ် 8 တက်ရောက်အစီအစဉ်များ, 10 MBA ဘွဲ့ရများနှင့်သခင်ပရိုဂရမ်နှင့်3ပါရဂူဘွဲ့အစီအစဉ်များကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကောလိပ်မှာလည်းထိုကဲ့သို့သောအီလီနွိုက်ပြည်နယ်စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ (IBC) အစီအစဉ်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်ပညာရေး & သုတေသနများအတွက် Vernon K. Zimmerman စင်တာ (CIERA), ကဲ့သို့သောအခြား Non-ဒီဂရီပရိုဂရမ်များနှင့်သုတေသနစင်တာများပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါကောလိပ်ကျောင်းတွင်လက်ရှိန်းကျင် 2,800 တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများနှင့် 1000 ဘွဲ့ရဆောင်ရွက်ပါသည်။
UIUC မှာသဘာဝအရင်းအမြစ်များအဆောက်အအုံ။ Vince Smith က / Flickr ကို
တောင်ပိုင်းကျောင်းပရဝုဏ်အတွင်းတည်ရှိပြီးအဆိုပါသဘာဝအရင်းအမြစ်အဆောက်အအုံဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ 17 နှင့် 18 ရာစုကာလအတွင်းတည်ဆောက် manor အိမ်များအများအပြားဆင်တူပါသည်။ ဒါဟာအီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဘူမိဗေဒနှင့်အီလီနွိုက်သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်စစ်တမ်းမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်များနှစ်ယောက်စလုံး UIUC မှာ Prarie သုတေသနအင်စတီကျု, သဘာဝအရင်းအမြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီး၏ယခင်ကအင်စတီကျု, အောက်မှာရှိပါတယ်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းအီလီနွိုက်ရဲ့သဘာဝသယံဇာတနှင့်ပတ်သက်ပြီးရည်မှန်းချက်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖန်တီးရန်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုရေရှည်တည်တံ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒများကိုကိုဖန်တီးရန်ဥပဒထုတ်လုပ်သူများကအသုံးပြုကြသည်။ ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တချို့ကစိုက်ပျိုးရေး, စားသုံးသူများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ (အေ့စ်) နှင့်အင်ဂျင်နီယာများ၏ကောလိပ်၏ဌာနမှူးများ၏ကောလိပ်၏ UIUC ရဲ့ဌာနမှူးဖြစ်ကြသည်။
UIUC မှာနိုင်ငံခြားရေးဘာသာစကားများကိုအဆောက်အဦး။ Dianne ရီ / Flickr ကို
အဆိုပါနိုင်ငံခြားဘာသာစကားကိုအဆောက်အအုံ (FLB) ဘာသာဗေဒဌာနမှအမှုဆောင်နေသည်။ အဆိုပါအဆောက်အဦးသုံးနှစ်ကြာဘာသာဗေဒဌာနပြီးနောက် 1968 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဝေး FLB ကနေအနည်းငယ်လုပ်ကွက်တခွန်းကိုရှာဖွေခြင်းနှင့် FLB တစ်နှစ်ထပ်မိတ္တူဖြစ်သည့်အဆောက်အဦး, အကြားအာရုံလိမ့်မည်။
ဘာသာဗေဒ၏ဦးစီးဌာနလစ်ဘရယ်ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံများ၏ UIUC ရဲ့ကောလိပ်အတွင်းဌာနဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဦးစီးဌာနဒုတိယဘာသာစကားနှင့်ဘာသာစကားသင်ယူနိုင်ခြင်းအဖြစ်အများအပြားအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားများသင်တန်းများအဖြစ်အင်္ဂလိပ်ပေးထားပါတယ်။ ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကိုဘာသာဗေဒသို့မဟုတ်ကွန်ပြူတာသိပ္ပံနှင့်ဘာသာဗေဒအတွက်အဓိကကိုလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများအတွက်ဘာသာဗေဒဒီဂရီအတွက်ဒုတိယအဘာသာစကားများ (MATESL) အဖြစ်သင်ကြားရေးအင်္ဂလိပ်ဝိဇ္ဇာတစ်ဦးမာစတာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပရိုဂရမ်, ဘာသာဗေဒအတွက်ဝိဇ္ဇာမာစတာနှင့်ဒဿနိကဗေဒ၏ဆရာဝန်အတွက်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်အီလီနွိုက် Urbana Champaign ကမှာသင်္ချာစာကြည့်တိုက်
တက္ကသိုလ်အီလီနွိုက် Urbana Champaign ကမှာသင်္ချာစာကြည့်တိုက်။ Dianne ရီ / Flickr ကို
Altgeld ခန်းမမှာတည်ရှိပါတယ်, အသင်္ချာစာကြည့်တိုက်သင်္ချာနှင့်စာရင်းဇယားနှင့်ပတ်သက်သောအရင်းအမြစ်များကိုရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစာကြည့်တိုက် 100,000 ကျော် volumes ကိုများနှင့်ပတ်ပတ်လည် 800 Serial ရှိပါတယ်။ ဒါဟာရုရှားသင်္ချာအကျင့်ကိုကျင့်၏စုဆောင်းခြင်း, monograph စုဆောင်းခြင်းနှင့်သင်္ချာစိတ္တဇဒေတာဘေ့စပါရှိသည်။ အားလုံးကျောင်းသားများနှင့်ဆရာ, ဆရာမများစာကြည့်တိုက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိနေစဉ်, ကအဓိကသင်္ချာဌာနနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနအဖွဲ့ဝင်များဆောင်ရွက်ပါသည်။
ယင်းသင်္ချာဌာနနှင့်စာရင်းအင်းနှစ်ဦးစလုံးလစ်ဘရယ်ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံများ၏ကောလိပ်အတွင်းဌာနဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်။ သင်္ချာဌာနအတွက်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများသင်္ချာ, Actuarial သိပ္ပံ, ဒါမှမဟုတ်သင်္ချာနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအဓိကနိုင်ပါတယ်။ စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနအတွက်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများစာရင်းအင်းများသို့မဟုတ်စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံတစ်ဒီဂရီအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးဌာနများဘွဲ့ရများနှင့်ပါရဂူဘွဲ့အစီအစဉ်များကိုဆက်ကပ်။
UIUC မှာ Bardeen အင်ဂျင်နီယာကို Quad
UIUC မှာ Bardeen အင်ဂျင်နီယာကို Quad ။ LH Wong က / Flickr ကို
အဆိုပါ John Bardeen ကို Quad သို့မဟုတ်အင်ဂျင်နီယာကို Quad အင်ဂျင်နီယာများ၏ကောလိပ်မှမူလနေရာဖြစ်သည်။ အဆိုပါ quad ကျောင်းသားများကိုလမ်းလျှောက်ဖို့အတှကျအထူးထူးအပြားပြားပန်းပုနှင့်လမ်းခရီးပါရှိပါတယ်။ Boneyard ချောင်းကတော့ quad မှတဆင့်တိုက်ရိုက်ပြေး။ John Bardeen သည်ကို Quad ရဲ့ namesake, ရူပဗေဒနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးပါမောက္ခဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကို transistor ၏ဖန်တီးမှုအဘို့ 1956 ခုနှစ်နှစ်ဦးနိုဘယ်ဆုနှင့်သမားရိုးကျသိပ္ပံ (BCS သီအိုရီ) ၏သီအိုရီအဘို့ 1972 ခုနှစ်။
UIUC မှာအင်ဂျင်နီယာများ၏ကောလိပ်တဝိုက် 8000 တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများနှင့် 3000 ဘွဲ့ရကျောင်းသားများအတွက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ, စိုက်ပျိုးရေး & ဇီဝအင်ဂျင်နီယာ, Bioengineering, ဓာတု & Biomolecular အင်ဂျင်နီယာ, မြို့ပြနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာ, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, လျှပ်စစ်နှင့်ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာ, စက်မှု & လုပ်ငန်းစနစ်များအင်ဂျင်နီယာ, ပစ္စည်းများသိပ္ပံ: အဆိုပါကောလိပ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဘွဲ့ကြိုနှင့်ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီပရိုဂရမ်များနှင့်အတူ 12 ဌာနများကမ်းလှမ်း အင်ဂျင်နီယာ, အင်ဂျင်နီယာရူပဗေဒနှင့်နျူကလီးယား, Plasma, Radiological အင်ဂျင်နီယာ & ။ 2015 ခုနှစ်, ဘွဲ့ကြိုအစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်သတင်းနှင့် World အစီရင်ခံစာ၏အမေရိက၏အကောင်းဆုံးကောလိပ်များ edition အတွက်6အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
UIUC ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းလုပ် ထိပ်တန်း 10 ဦးအင်ဂျင်နီယာကျောင်းများ ။
UIUC မှာဖျော်ဖြေဝိဇ္ဇာအဘို့အ Krannert ရေးစင်တာ
UIUC မှာဖျော်ဖြေဝိဇ္ဇာအဘို့အ Krannert ရေးစင်တာ။ Ron ဖရေဇီယာ / Flickr ကို
အဆိုပါဖျော်ဖြေဝိဇ္ဇာများအတွက် Krannert Center က UIUC မှာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သင်ကြားရေးစက်ရုံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Foellinger ဂရိတ်ခန်းမ, Tyron ပွဲတော်ပြဇာတ်ရုံ, Colwell Playhouse နှင့်စတူဒီယိုရုပ်ရှင်ရုံ: အဆိုပါအဆောက်အဦ4ရုပ်ရှင်ရုံရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Krannert စင်တာပြင်ပတွင်လုပ်ဆောင်တွင်သို့မဟုတ် Lounge မှကျောင်းသားများအတွက်တစ်ဦးပွဲကြည့်စင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစင်တာကိုလည်းဘားနှင့်ဖီးရှိပါတယ်။ ဤသည်မတူကွဲပြားသောအာကာသချီကာဂိုဆငျဖိုနီသံစုံတီးဝိုင်းတို့ကစပျစ်ရည်ကို-မျိုးစုံမြည်းစမ်းဖြစ်ရပ်နှင့်ကျောင်းသား-ထုတ်လုပ် One-လုပ်ရပ်များမှသည်စွမ်းဆောင်ရည်မှအရာအားလုံးကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်။
ဤသည်အာကာသအများအားဖြင့် Fine နှင့်အသုံးချဝိဇ္ဇာ၏ကောလိပ်အားဖြင့်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဗိသုကာပညာ, အနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်း, အက, အခင်းအကျင်းဗိသုကာပညာ, ဂီတ, ပြဇာတ်ရုံများနှင့်မြို့ပြနှင့်ဒေသဆိုင်ရာစီမံကိန်း: အဆိုပါကောလိပ်ကသူတို့ရဲ့7ဌာနများအတွက်ဘွဲ့ကြိုဒီဂရီပေးထားပါတယ်။ ဒီကောလိပ်၏မှတ်သားလောက် Alumni Pi ဒါရိုက်တာအန်းလီက, ပန်းခြံများနှင့်အပန်းဖြေသရုပ်ဆောင်နစ်ခ် Offerman နှင့်အိုလံပစ်မဿဲ Savoy ၏ဘဝများပါဝင်သည်။
လှုပ်ရှားမှုများနှင့် UIUC မှာအပန်းဖြေစင်တာမှ
လှုပ်ရှားမှုများနှင့် UIUC မှာအပန်းဖြေစင်တာတွင်။ Dianne ရီ / Flickr ကို
လာမယ့်သတိရအောက်မေ့အားကစားကွင်း, ထိုလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အပန်းဖြေစင်တာ (ARC) မှတည်ရှိပြီး UIUC အကြီးမားဆုံးကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာဖြစ်ပါတယ်။ 340.000 စတုရန်းပေမှာ, ဒီစက်ရုံတစ်ဦး 35 ပေတောင်တက်နံရံနှစ်ခု 50 မီတာရေကူးကန်များ, တစ်ဦးကို 35-လူတစ်ချွေးပေါင်းအိမ်လေးအားကစားရုံ, 12 Racquetball တရားရုံးများနှင့်သင်ကြားပို့ချမီးဖိုချောင်ပါရှိသည်။ ကျောင်းသားများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များက ARC ရဲ့အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များနှင့်အတန်း၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်း, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှိပ်နယ်နှင့်ကျန်းမာချက်ပြုတ်အတန်းကိုဆက်ကပ်။ ဒါ့အပြင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကလပ်အများအပြားနှင့် intermural အားကစားအသင်းများကဒီမှာသူတို့ရဲ့အလေ့အကျင့်ဖြင့်ကိုင်ထားပါ။
ကျောင်းသားများအတွက်အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်ကြေးကိုမကြာခဏသူတို့ရဲ့ကျူရှင်များတွင်ပါဝင်သည်။ ရပ်တည်မှုနှင့် Alumni တစ်ဦးကိုလစဉ်ကြေးတစ်ဦးငွေပေးချေမှုနှင့်အတူစက်ရုံသုံးစွဲဖို့နိုင်ကြသည်။
အီလီနွိုက်စ Urbana Champaign ကတက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ကြိုစာကြည့်တိုက်
အီလီနွိုက်စ Urbana Champaign ကတက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ကြိုစာကြည့်တိုက်။ Dianne ရီ / Flickr ကို
အဆိုပါတက်ရောက်စာကြည့်တိုက်အဖြစ်လူသိများအဆိုပါဘွဲ့ကြိုစာကြည့်တိုက်, စာအုပ်များနှင့်စာနယ်ဇင်း၏ကြီးမားသောခင်းကျင်းပေးထားကြောင့်လည်း 200,000 volumes ကိုအဖြစ်အရင်းအမြစ်များကိုတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်အကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။ အသစ်သောသုတေသနနှင့်ကွန်ပျူတာနည်းပညာကျောင်းသားများကိုလေ့ကျင့်ဖို့တက္ကသိုလ်လူတန်းစားအစီအစဉ်စာကြည့်တိုက်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်သင်တန်းများသို့တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူတို့ကအစစာရေးဆရာရဲ့အလုပ်ရုံနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစင်တာကိုဆက်ကပ်။
အဆိုပါတက်ရောက်စာကြည့်တိုက်စတဲ့မီဒီယာဘုံအာကာသပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါအာကာသတဲ့အစိမ်းရောင်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူစတူဒီယို, တည်းဖြတ်ဘူတာနှင့်အသံပြခန်းရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားများကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောကင်မရာများ, ဂိမ်းစက်များ, projector ကိုအမျိုးမျိုး Adapter ကများနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးအဖြစ်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုထုတ်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
UIUC မှာဗိမာနျတျော Hoyne Buell ခန်းမ
UIUC မှာဗိမာနျတျော Hoyne Buell ခန်းမ။ Dianne ရီ / Flickr ကို
alum Ralph ဂျွန်ဆင်ကဒီဇိုင်း, ဗိမာနျတျော Hoyne Buell ခန်းမအဓိကအားဗိသုကာပညာ၏အီလီနွိုက်ကျောင်းအမှုဆောင်နေသည်။ တောင်ဘက်ကို Quad ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး, ဒီ 3-ဇာတ်လမ်းအဆောက်အအုံဒီဇိုင်းစတူဒီယိုတစ်ခုခနျး, ရုံးခန်းများနှင့်စာသင်ခန်းရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ဗဟိုမှာတော့ကုလားထိုင်နှင့်ကျောင်းသားများအလုပ်လုပ်ဘို့စားပွဲနှင့်အတူကာမိုးလုံလေလုံမှန်အိမ်ဆောင်လည်းမရှိ။
အဆိုပါအဆောက်အဦ UIUC alum နှင့်ဗိသုကာပညာရှင်ဗိမာနျတျော Hoyne Buell ပြီးနောက်အမည်ရှိခဲ့သည်။ သူကခေတ်မီကုန်တိုက်၏အဘစဉ်းစားသည်။ သူ၏အကြံအစည်သူတို့ကိုပတျဝနျးကငျြယာဉ်ရပ်နားစာရေးတံနှင့်အတူအလယ်ရှိစျေးဆိုင်ထားတော်မူ၏။
ဗိသုကာပညာ၏အီလီနွိုက်ကျောင်း, Fine နှင့်အသုံးချအနုပညာကောလိပ်အတွင်းဌာန, ဒီကျောင်းကတစ်သီအိုရီဗိသုကာများ၏ကဲ့သို့ဥာဏ်လက်ပေါ်အတွေ့အကြုံများကိုသင်ယူနှင့်အတူကျောင်းသားများကိုထောက်ပံ့ဆက်လက် 1867. ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တချို့ကမှတ်သားလောက် Alumni များပါဝင်သည်: Dina Griffin, ချီကာဂိုအနုပညာအင်စတီကျုမှာခေတ်သစ် Wing အပေါ် Renzo စန္ဒယားနှင့်အတူဒီဇိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်; Carol ရော့စ်လို, Barneys လိုသည်ဥက္ကလာဟိုးမားစီးတီးဖက်ဒရယ်အဆောက်အအုံ၏ဒီဇိုင်နာ; ချားလ်စ် Luckman နှင့် Willian Perrera, ဝေါ့ဒစ္စနေးနှင့် Disneyland ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အတူပူးပေါင်း။
အီလီနွိုက်စ Urbana Champaign ကတက္ကသိုလ် Altgeld ခန်းမ
အီလီနွိုက်စ Urbana Champaign ကတက္ကသိုလ် Altgeld ခန်းမ။ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်စာကြည့်တိုက် / Flickr ကိုတက္ကသိုလ်
1867 ခုနှစ်တွင် Build, Altgeld ခန်းမမူလက UIUC ရဲ့စာကြည့်တိုက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် 1927 ကနေ 1955 ခုနှစ်မှ, ကနေအိမ်ဥပဒေကောလိပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ အခုတော့ဒီအ Richardsonian-Romanesque စတိုင်အဆောက်အဦးသင်္ချာနဲ့ actuarial သိပ္ပံဌာနအမှုဆောင်နေသည်။
အဆိုပါအဆောက်အဦးက၎င်း၏ခေါင်းလောင်းမျှော်စင်, တက္ကသိုလ်ဆွဲလဲအားဖြင့်လူသိများသည်။ အဆိုပါ 1914 နှင့် 1921 ခုနှစ်ဘွဲ့ရအတန်းတစ်ဦးကလက်ဆောင်တစ်ခု, ထိုခေါင်းလောင်းမျှော်စင် 15 ခုခေါင်းလောင်းထိုးပါရှိသည်။ အဆိုပါသုံးအကြီးဆုံးခေါင်းလောင်း UIUC သမ္မတဒေါက်တာဦး Edmund Jane ဂျိမ်းအတိတ်ထံအပ်နှံကြသည်။ 1920 ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဆွဲလဲတပ်ဆင်ကတည်းက Altgeld ခန်းမခေါင်းလောင်းဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပလျက်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားတဆယ်မိနစ်ဖျော်ဖြေပွဲတိုင်းနင်္လာမှသောကြာအဖြစ်အထူးတက္ကသိုလ်အခါသမယပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
UIUC မှာ McFarland သတိရအောက်မေ့ဘဲလ်မျှော်စင်
UIUC မှာ McFarland သတိရအောက်မေ့ဘဲလ်မျှော်စင်။ cantonstady / Flickr ကို
McFarland သတိရအောက်မေ့ဘဲလ်မျှော်စင်တောင်ဘက်ကို Quad ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးတစ်ခု 185 ပေမျှော်စင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမျှော်စင် Altgeld ခန်းမမှာတက္ကသိုလ်ဆွဲလဲနှင့်အတူ 49 ခေါင်းလောင်းနှင့်ကွင်းရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါခေါင်းလောင်း 500 သီချင်းတွေကိုနှင့်အတူကွန်ပျူတာချစ်ပ်များကပရိုဂရမ်နေကြသည်။ ဗိသုကာ alum ၏ကျောင်း, ရစ်ချတ် McFarland, ထိုခေါင်းလောင်းမျှော်စင်၏ပြီးစီးမှ 1.5 သန်းဒေါ်လာလှူဒါန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါမျှော်စင်သည်သူ၏နှောင်းပိုင်းတွင်ဇနီးစာရာ "လီ" McFarland ပြီးနောက်အမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ သူမသေဆုံးပြီးနောက်ရစ်ချတ် McFarland ကိုလည်းလယ်ယာစိုက်ပျိုးနောက်ခံနှင့်အတူကျောင်းသားနှစ်ဦးကိုပညာသင်ဆုကို set up ။
စက်တင်ဘာလ 2008 ခုနှစ်တွင်အမည်မသိကျောင်းသားအုပ်စုတစုတစ်ဦးနောက်ပြောင်မှုများအဖြစ်ခေါင်းလောင်းမျှော်စင်ဖို့လက်စွပ် trilogy ပာ၏သခင်တစ်ဦးထံမှ "မျက်လုံး Sauron ကို၏" ပုံတူကဆက်ပြောသည်။
အီလီနွိုက်စ Urbana Champaign ကတက္ကသိုလ် Foellinger ဇာတ်ရုံ
အီလီနွိုက်စ Urbana Champaign ကတက္ကသိုလ် Foellinger ဇာတ်ရုံ။ Vince Smith က / Flickr ကို
အဓိက quad အနီးတွင်တည်ရှိပြီးယင်း Foellinger ဇာတ်ရုံကြီးတစ်ခုဟောပြောပွဲခန်းမနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အာကာသဖြစ်ပါတယ်။ UIUC alum Clarence H. Backall ကဒီဇိုင်း, အဆောက်အအုံ 17,000 စတုရန်းပေကိုဖုံးလွှမ်း။ ဒါဟာထိပ်ပေါ်မှာတစ်နာနတ်သီးနဲ့သတ္တုအမိုးခုံးများကဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။ အဆိုပါနာနတ်သီးပုခနျးရဲ့အကျောင်းသားများနှင့်ဧည့်သည်များမှကြိုဆိုတဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ 1907 ခုနှစ်တွင်ယင်း၏ပြီးစီးမှာအဆောက်အဦးတေးရေးဆရာအက်ဒွပ် MacDowell ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ 1985 ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ် Helene Foellinger မှ rededicated ခဲ့သည်။
အဆိုပါဇာတ်ရုံများတွင်တစ်ဦးချင်းစီတစ်နေ့တာ၏ထက်ဝက်သင်တန်းပို့ချချက်မှမြှုပ်နှံဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, အခြားတစ်ဝက်ကျောင်းသားဘဏ်ဍာ, ဧည့်သည်ပို့ချချက်များနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ဖွင့်သည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စီစဉ်ခြင်း၏ရုံးခနျးစီတစ်ပတ်ကိုအသုံးပြုရန်သူ 17,000 ကျောင်းသားများကိုပြေး။
UIUC မှာ Krannert အနုပညာပြတိုက်
UIUC မှာ Krannert အနုပညာပြတိုက်။ Vince Smith က / Flickr ကို
အဆိုပါ Krannert အနုပညာပြတိုက် (Kam) နှင့် Kinkead Pavilion အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အတွက်ဒုတိယအကြီးဆုံးဒဏ်ငွေအနုပညာပြတိုက်နှင့်တက္ကသိုလ်ရဲ့အနုပညာစုဆောင်းခြင်းများအတွက်ဂရုစိုကျတယျ။ 1961 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်, ပြတိုက်ရဲ့ 10 အမြဲတမ်းပြခန်းလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအနုပညာပါရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစနှစ်စဉ် 12 မှ 15 ပြောင်းလဲနေတဲ့ပြပွဲတင်ပြသွားပါသည်။ အဆိုပါပြတိုက်ကိုလည်းအထက်တန်းကျောင်းစာသင်ခန်းမှတဆင့်ကျောင်းကခရီးစဉ်, ဆရာမအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်မူလတန်းပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ Giertz ပညာရေးစင်တာပြတိုက်အတွင်း၌တည်ရှိပြီး; ဗဟိုအနုပညာစာအုပ်တွေ, မိတ္တူပွားထဲ, ဆရာလက်စွဲများနှင့်ဗီဒီယိုများရရှိထားသူတစ်ဦးအခမဲ့ငွေချေးစာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားများနှင့်လူထုအဖွဲ့ဝင်များ Krannert အစီအစဉ်များ @ လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကလေးများအတွက်ပြတိုက်မှတဆင့်ကမ်းမှာလုပ်အားပေးနိုင်ပါတယ်။
အီလီနွိုက်စ Urbana-Champaign ကတက္ကသိုလ်ကိုသမ္မတရဲ့အိမ်
အီလီနွိုက်စ Urbana-Champaign ကတက္ကသိုလ်ကိုသမ္မတရဲ့အိမ်။ stantoncady / Flickr ကို
1931 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးသည် UIUC သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့အိမ်ဟယ်ရီ Woodburn Chase ကတည်းကတိုင်းတက္ကသိုလ်သမ္မတ၏တရားဝင်အိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ 14,000 စတုရန်းပေဂျြောဂြီယနျ Revival နေအိမ်ကိုလည်းရာထူးဂုဏ်ရှိန်, ကျောင်းသားဟောင်းများနှင့်အသိုင်းအဝိုင်းအုပ်စုများသွားရောက်လည်ပတ်များအတွက်နေထိုင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ လာမယ့်ဂျပန်အိမ်နှင့်ရုက္ခဗေဒဥယျာဥ်မှတည်ရှိပြီးအိမ်ဥယျာဉ်၏စာရေးတစ်ဦးအမြင်ရှိပါတယ်။ 2001 ခုနှစ်တွင်တက္ကသိုလ်ဘေးကမိုင် C. Harvey ရွေးချယ်ရေးဥယျာဉ်တစ်ခုအုတ်ဟင်းလင်းပြင်ကဆက်ပြောသည်။ အဆိုပါဟင်းလင်းပြင်နှင့်ဥယျာဉ်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ဖြစ်ရပ်များဖို့သမ္မတသို့မဟုတ်ဧည့်သည်များခံစားရန်အဘို့အကာပြင်ပအာကာသကိုဆက်ကပ်။
UIUC စိုက်ပျိုးရေး, စားသုံးသူများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံစာကြည့်တိုက်
UIUC စိုက်ပျိုးရေး, စားသုံးသူများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံစာကြည့်တိုက်။ ကဲန် Lund / Flickr ကို
အဆိုပါအေ့စ် (စိုက်ပျိုးရေး, စားသုံးသူများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံစာကြည့်တိုက်ကောလိပ်အေ့စ်ဒကျောင်းဝင်း၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်။ အဆိုပါအေ့စ်စာကြည့်တိုက်ပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးမျိုးအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ညီလာခံစင်တာနှင့်မျိုးစုံညီလာခံခန်း, အအေ့စ် Alumni အစည်းအရုံးရရှိထားသူ, ထူးခြားဆန်းပြားအပေါ်ပြပွဲ အပင်များနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာကွန်ပျူတာ Facility ။ အမျိုးမျိုးသောညီလာခံခန်းကိုလည်းကျောင်းသားများ။ ထိုကဲ့သို့သော video conferencing အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောသာယာအဆင်ပြေမှုများ, ရပ်နေမိုက်ခရိုဖုန်း, ဒါမှမဟုတ်တင်ဆက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများကိုဆက်ကပ်ခြင်းနှင့်အဝန်းအဖွဲ့ဝင်ငှားရမ်းနိုင်သောနေရာ 5000 စတုရန်းပေမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ သူတို့ကအစပရင်တာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်, မိတ္တူကူးစက်, နှင့်ကွန်ပျူတာများ။
စိုက်ပျိုးရေးကောလိပ်, စားသုံးသူများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံစိုက်ပျိုးရေး-related သိပ္ပံအာရုံစိုက်။ ၎င်း၏အဆောက်အအဓိကအားဖြင့်တောင်ကျောင်းပရဝုဏ်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးနှင့်ပါဝင်သည်နေကြသည်: Turner ခန်းမ, တိရိစ္ဆာန်သိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်း, Madican ဓာတ်ခွဲခန်း, စိုက်ပျိုးရေးအင်ဂျင်နီယာသိပ္ပံအဆောက်အအုံ, Mumford ခန်းမနှင့် Bevier ခန်းမ။ ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများနှင့်ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများ 8 ဦးစီးဌာနမဆိုအတွက်လေ့လာနိုင်သည်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဇီဝအင်ဂျင်နီယာ, လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်စားသုံးသူစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်, တိရိစ္ဆာန်သိပ္ပံ, သီးနှံသိပ္ပံ, စားနပ်ရိက္ခာသိပ္ပံနှင့်လူ့အာဟာရ, လူ့ခြင်းနှင့်ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး, သဘာဝအရင်းအမြစ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံနှင့်များ၏ဌာနခွဲ အာဟာရသိပ္ပံ။
အီလီနွိုက်စ Urbana Champaign ကပင်မကို Quad တက္ကသိုလ်
အီလီနွိုက်စ Urbana Champaign က၏ Univeristy မှာအဓိကကို Quad ။ ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Esham / Flickr ကို
အီလီနွိုက်စ Urbana-Champaign ကတက္ကသိုလ်ပင်မကို Quad ကျောင်းဝင်း၏ဗဟိုအတွက်ကြီးမားတဲ့စိမျးလနျးဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျောင်းသားကျောင်းသူများ, အားကစားကစားအပန်းဖြေ, ဒါမှမဟုတ်အတန်းရှေ့မှာလမ်းလျှောက်ယူများအတွက်အာကာသပေးထားပါတယ်။ အဓိက quad ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် Illini သမဂ္ဂနှင့် Foellinger ပရိသတ်ခန်းမဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Foellinger ဇာတ်ရုံ၏ထိပ်တွင် quad စီးနထေိုငျတဲ့ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်များ UIUC က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် quad ၏ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ UIUC လည်းတိုက်ရိုက်ပြည်နယ်လယ်ယာစင်တာစီး, အပြာရောင်ရေစူပါကွန်ပျူတာ, လျှပ်စစ်နှင့်ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာအဆောက်အအုံ, Newmark ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအင်ဂျင်နီယာဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အရှင် Te Chow Hydrosystems ဓာတ်ခွဲခန်းရှိပါတယ်။
သင်ကအီလီနွိုက် Urbana-Champaign ကတက္ကသိုလ်လိုပါလျှင်ဤအခြားထိပ်တန်းပြည်သူ့တက္ကသိုလ်များထဲက Check:
ဂျော်ဂျီယာ Tech မှ: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
အင်ဒီယားနားတက္ကသိုလ်: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
Penn State University တွင်: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
Purdue တက္ကသိုလ်: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
UC Berkeley: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
UCLA: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
UCSD: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
မီချီဂန်တက္ကသိုလ်: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
မင်နီဆိုတာတက္ကသိုလ်: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
UNC မှ Chapel Hill: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
Wisconsin ပြည်နယ်၏တက္ကသိုလ်: ကိုယ်ရေး | GPA-SAT-ACT ဇယား
အဆိုပါအိုင်ဗီလိဂ်ကျောင်းများ, 2020 အတန်းအစားများအတွက်လက်ခံမှုနှုန်း
Notre Dame ဓာတ်ပုံခရီးစဉ်တက္ကသိုလ်
ကျောင်းဝိညာဉ်တော်၏တန်ချိန် 10 ကောလိပ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များ
တစ်ကောလိပ်ဗိုလ်မှူး 101 ရွေးချယ်ခြင်း: တစ်ဦးကမိဘလမ်းညွှန်
ကာစီနို comp အခြေခံ
ကြီးမြတ်တဲ့လှိုင်းစီးနေသည်လှုပ်ရှားမှုပုံ Photograph Get လုပ်နည်း
အဆိုပါ GOP တည်ထောင်ဆိုတာဘာလဲ
နပိုလီယံစစ်ပွဲများ: Badajoz ၏တိုက်ပွဲ
လတ်ြလပ်ခ၏ကာကွယ်ရေးအတွက်, ဘဝ, Liberty, နေအိမ်နှင့်မိသားစု
တက္ကသိုလ် Tennessee ပြည်နယ်၏အဆင့်လက်ခံရေး
ဓာတုဗေဒအတိုကောက်ပေးစာ J ကိုသို့မဟုတ် K သည်နှင့်အတူစတင်ခြင်း
အိန္ဒိယဆီးဖြူ၏ Ayurvedic ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
အယ်လ်ဘေးနီးယား - ထိုရှေး Illyrians
အဆိုပါ Merry မုဆိုးမဇာတ်လမ်းအကျဥ်း
သင်ကသင့်ရဲ့ Next ကို Pickup Truck ကားငှားရမ်းသို့မဟုတ် Buy သငျ့သလော
ဗေဒကဘာလဲ? အနုပညာ, အလှအပ၏ဒဿနိကဗေဒ, အမြင်
မိသားစုနေအိမ်ညနေပိုင်း (FHE) ၏အရေးပါမှု
DNA ကို & Models
သင်မည်သို့ကြောင့်ရှည်လျားတဲ့ Make တစ်စက္ကူကိုဆန့်နိုင်ပါသလား?
ဗေသနိရွာမှာယရှေုသညျဘိသိကျခံ (မာကု 14: 3-9)
အဆိုပါနှာခေါင်းပေါ်တွင်3သမိုင်းဝင်တောင်တက်ခြင်းပိုငျး
သွေး၏ Volume ကို & ဓာတုရေးစပ်သီကုံးမှုဆိုတာဘာလဲ